मरूभुमीको तातो रापमा छु म।
विदेशी हरू को चापमा छु म ।
उफ जताबाट पनि पेल्दो रहेछ
सारै अप्ठ्यारो कापमा छु म।
पहिले धर्म त गरेकै थिए खैके
आज कुनजुनीको पापमा छु म।
यहाँ जत्ति काम गरेनि जसछैन
छिट्टै नेपाल फर्कने आस मा छु म ।
कहिले एकछिन फुर्सदछैन हरे
कस्तो कामनैकामको चापमा छु म।
Jayaram Regmi Boston USA on 2016-04-09 04:24:36
Poem : Aama ko maya यो प्रवासमा रात सकिनै लागेको थ्यो!! सखारै आमाको फोन❤️ म झल्याँस्स के छ बाबु खबर ? सन्चै त छस् नि ? अचेल फोन नि विरलै गर्छस् ? मनकारि मान्छे छन् कि छैनन् त्याहाँ ? साथिहरु कस्ता छन् ? आफ्नो राम्रो ख्याल गरेस? झ्याप्प मोटाएस् ? उता बाट एकोहोरो आमाका मायाको प्रश्नहरु!!! सप्पै ठिक छ, चिन्ता नलिनु अहिले काममा जाने बेला भयो! भोलि फोन गर्छु है ! म स्तब्द 💕 तर त्यो भोलि कहिल्यै आएन! अह! आऊदै आएन! मलाई के थाहा ! त्यो फोन आमाले मृत्यु को मुखबाट अन्तिम बोलिको रुपमा मलाई बिसाएकी रहिछन्!!! जयराम रेग्मी